'नरकबाट पुनर्मिलन' हेडलाइन्स फेलिसा गुलाब र तामारा ग्लान - आईहोरर
घर हरर मनोरन्जन समाचार 'नरकबाट पुनर्मिलन' हेडलाइन्स फेलिसा गुलाब र तामारा ग्लान
'नरकबाट पुनर्मिलन' हेडलाइन्स फेलिसा गुलाब र तामारा ग्लान
by पाइपर सेन्ट जेम्स अप्रिल 10, 2020
द्वारा लिखित पाइपर सेन्ट जेम्स अप्रिल 10, 2020
हामी मध्ये धेरैले देखेका उठेका चलचित्रहरूमा फर्किनु हेर्दा आराम र आरामको समय हामी सबैलाई आवाश्यक हुन्छ अलगाव र अनिश्चितताको समयमा। हाम्रो लागि भाग्यशाली, त्यस्तो चलचित्र यस शरद filmतुमा फिल्म सुरु गर्न निर्देशक / लेखक हेडेन न्युम्यानले आफ्नो पहिलो चलचित्रमा शुरू गर्नु पर्ने हुन्छ। बाट पुनर्मिलन नरक.
का लागि आधिकारिक सारांश बाट पुनर्मिलन नरक हो;
उनका बुबाको मृत्यु भएदेखि रिले कन्नेर आफ्नो गृहनगर फर्केनन्। तर जब एक हत्याको साथीको खबर आउँदछ, रिले घर फर्कन बाध्य हुन्छन्, नजान्दै उसको साथीहरूलगायत उसको जीवन चाँडै नै ठूलो खतरामा पर्नेछ। जसरी शरीर गणना बढ्दै जान्छ, रिले पत्ता लगाउँदछ कि हत्याराले उसको पूर्व सहपाठीहरूलाई मार्ने क्रममा धेरै विशिष्ट योजना बनाएको थियो। यो समयको बिरूद्ध एउटा दौड हो किनकि रिलेले हत्याराको पहिचान सिक्नुपर्दछ, किनभने उसले गहिरो चिन्ता गरेका सबै मर्नु अघि। यो एक पुनर्मिलन को एक नरक हुन गइरहेको छ।
न्यूम्यानले iHorror लाई भन्छ, पुनर्मिलन बाट नरक in ० को स्ल्याशर विधासँग मिल्दोजुल्दो छ, शिरामा चिच्याउनु र मलाई थाहा छ तपाईंले पछिल्लो ग्रीष्म .तुमा के गर्नुभयो। धेरै यी चलचित्रहरू जस्तै, उनले हामीलाई भने कि दर्शकहरूले चरित्रहरूको ख्याल राख्दछन् र अन्त्यको भविष्यवाणी गर्दैनन्; दुई तत्वहरू यति धेरै डराउने फिल्महरू विगत दशकमा गुमाए।
रियुनियनको कक्षा रोस्टर भरिएको छ, र डराउने प्रशंसक तामारा ग्लान हेर्न उत्साहित हुनेछन् (हेलोवीन 5) र फेलिसा गुलाब (निन्द्रा शिविर) यस परियोजनाको साथ जोडिएको छ। यसमा संलग्न अन्य कलाकारहरूमा जुली एनी प्रेसकोट, म्याक्सिमो जियानफ्रेन्को सोरेंटिनो, क्रिस जेनेर्ट, र रिक स्टाइजेन्स्की शामिल छन्। Styczynski 13X स्टूडियो को निर्माता र मालिक पनि हो, र हत्यारा द्वारा दान गरिएको मास्क बनाउने छ। वा हत्याराहरू? हम्म ...
न्युम्यानले निर्देशक पनि ल्याए जंगली बदला, जेक Zelch स्मिथ, आफ्नो सह-लेखक को रूप मा।
यस परियोजना कोष लाई सहयोग गर्न, Newman indiegogo मा बदलिएको छ, र उनी र उनको टोलीले केहि अविश्वसनीय सुविधा प्रदान गरिरहेका छन्! केवल तीन हप्ता भन्दा कम बाँकीसँग, डराउने प्रशंसकहरूले निश्चित रूपमा अभियानमा हेर्नु पर्छ सबै सुविधाहरू अदृश्य हुनु अघि।
भर्खर $ per भत्ताबाट सुरू गरेर उनीहरूको फेसबुक पृष्ठमा धन्यबाद र थामारा ग्लिन र फेलिसा गुलाबसँग डिनरको लागि $ १,००० मा पाउनुहोस्। अन्य रमाईलो भत्ताहरू केवल $ for को लागि वर्ग ईयरबुकमा समावेश छन्! केवल $ १० को लागि तपाईले १२ × १ pos पोस्टर कास्ट र निर्देशकद्वारा स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ!
विधा आफैंको प्रशंसकको रूपमा, बाट पुनर्मिलन नरक रोलर कोस्टरको एक नरक हुन जाँदैछ र आशा छ कि तत्वहरू स्लेशर फिल्महरू फिर्ता ल्याउँदछ जुन लामो समयदेखि अभाव भएको थियो।
लुपमा राख्नको लागि पुनर्मिलन बाट नरक तिनीहरूको अनुसरण गर्नुहोस् फेसबुक समूह यहाँ!
फेलिसा गुलाबहेडेन न्यूम्याननरकबाट पुनर्मिलनरिक Styczynskiस्लेशरतामारा ग्लाइन
डाइटर लेजर, 'मानव Centipede (पहिलो अनुक्रम)' को स्टार मर्नुभयो
FX मास्टर रोब Botin, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ संसारमा?